people Nepal » कसले नेपाली एटीएमबाट पैसा चोरिरहेको छ ? कसले नेपाली एटीएमबाट पैसा चोरिरहेको छ ? – people Nepal
कसले नेपाली एटीएमबाट पैसा चोरिरहेको छ ?
काठमाडौँ, १३ मंसिर । एटीएमबाट पैसा चोरी गर्नेमा अधिकांश विदेशी नागरिक भेटिएका छन् । केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआईबी) ले गरिरहेको अनुसन्धानमा यस्तो तथ्य फेला परेको हो ।
२०६८ वैशाखदेखि हालसम्म पक्राउ परेकाहरूबाट १९ अर्ब ६४ करोड ५१ लाख रुपैयाँ बिगो दाबी गरिएको छ । उक्त अवधिमा विभिन्न बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट बैंकिङ कसुरसम्बन्धी ५ सयभन्दा बढी आवेदन परेको प्रहरीले जनाएको छ । कान्तिपुरमा खबर छ ।